Gangster Group ကတော့Game Overဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ယုန်လေး
အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
7 May 2018 . 10:25 AM
အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျစွာ ပြောလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
Original Gangster3ကို ဆင်ဆာ အဖွဲ့က ပြသခွင့်မပြုတဲ့ အတွက် ယုန်လေး က အခုလိုသူကြိုးစားခဲ့သမျှတွေ အလကားဖြစ်ကုန်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို အသံဖိုင်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်လည်း တော်ရုံတန်ရုံဆိုရင်တော့ စိတ်ဓာတ်ဘယ်ကျမလဲ .
ဒီလိုကြီးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ အချိန် ငွေ အနုပညာ အများကြီးပါ။ အများသိအောင် Share ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်” ဆိုပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Original Gangster3ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်
ဆင်ဆာ အဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Miss တွေကို ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ အခန်းတွေအပြင် ဗုံးတွေတပ်ဆင်တာတွေသေနတ်ပစ်ခတ် တဲ့ အခန်းတွေပါဝင်တဲ့ အတွက် အများပြည်သူပြသရန်မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဆင်ဆာလုံးဝမပေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။
Gangster Group ကတော့ Game Over ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးပရိသတ်ကို စိတ်မကောင်းစွာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit:Kyaw Phone Aung Facebook
အားလုံးကို နှုတျဆကျရတော့မယျဆိုပွီး စိတျဓါတျကစြှာ ပွောလိုကျတဲ့ ယုနျလေး
Original Gangster3ကို ဆငျဆာ အဖှဲ့က ပွသခှငျ့မပွုတဲ့ အတှကျ ယုနျလေး က အခုလိုသူကွိုးစားခဲ့သမြှတှေ အလကားဖွဈကုနျလို့ စိတျဓါတျကပြွီး အားလုံးကို နှုတျဆကျရတော့မယျဆိုတဲ့ ဗီဒီယို အသံဖိုငျတဈခုကို သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“ကြှနျတျောလညျး တျောရုံတနျရုံဆိုရငျတော့ စိတျဓာတျဘယျကမြလဲ .
ဒီလိုကွီးကတော့ မဖွဈသငျ့ဘူးထငျပါတယျ။ အခြိနျ ငှေ အနုပညာ အမြားကွီးပါ။ အမြားသိအောငျ Share ပေးဖို့တောငျးဆိုပါတယျ” ဆိုပွီးတငျထားတာဖွဈပါတယျ။
Original Gangster3ရိုကျကူးခဲ့စဉျ
ဆငျဆာ အဖှဲ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအရ Miss တှကေို ပွနျပေးဆှဲတဲ့ အခနျးတှအေပွငျ ဗုံးတှတေပျဆငျတာတှသေနေတျပဈခတျ တဲ့ အခနျးတှပေါဝငျတဲ့ အတှကျ အမြားပွညျသူပွသရနျမသငျ့တျောဘူးဆိုတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ ဆငျဆာလုံးဝမပေးဘူးလို့လညျးသိရပါတယျ။
Gangster Group ကတော့ Game Over ဖွဈသှားပွီဆိုပွီးပရိသတျကို စိတျမကောငျးစှာပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။